एक युवतीको पी’डा : पति , ससुरा र नन्दका श्रीमानले चुरोटका ठुटाले सम्बे,दनशील अं,ङ्ग पो’ल्दै रात भरी क’रणी गर्थे , – Dainik Sangalo
एक युवतीको पी’डा : पति , ससुरा र नन्दका श्रीमानले चुरोटका ठुटाले सम्बे,दनशील अं,ङ्ग पो’ल्दै रात भरी क’रणी गर्थे ,
October 29, 2020 262
बझाङ — क’र’णी र यात,नाको कहा,ली’लाग्दो शृंख,लाबाट फु’त्किएर जिल्ला अस्पताल बझाङको अन्त,रंग विभागमा भर्ना भएकी २१ वर्षीया उनी विगतको सम्झनाले वि,क्षिप्त छिन् । उनको अस ह्य छ’टप’टी र ची,त्कारले बेलाबेला छेउछाउका बि’रामी र कुरुवाको ध्यान खिच्ने गरेको छ । उनी स्वास्थ्यकर्मीसँग आफूले भो’गेको कहा,ली’लाग्दो पी’डा सुनाउँछिन् । पूरा सुनाउन नपाउँदै फेरि बे,होस हुन्छिन् ।
शनिबार भेट्दा उनी चार दिनपछि पूर्ण होसमा आएकी रहिछन् । ‘पा’पीहरू सबै लागेर मलाई क’र’णी गरे । आफूले नपुगेर बाहिरका मान्छेलाई पनि बोलाएर उस्तै गर्न लगाए,’ उनले भनिन्, ‘पानी त खान देओ भन्दा पनि दिएनन् । उल्टै सबैले मुखमा पि,साब फेरिदिए । प्यास मेटाउन त्यो पनि खाएँ । चुरोटले जीउभरि पोले ।’ आफूले भो’गेको चरम यात,ना र शृंखलाबद्ध क’र’णीको पी’डा सुनाउन खोज्दाखोज्दै उनी फेरि बे,होस भइन् । बे’हो,सीमै रुँदै बर्बरा,उन थालिन् । ‘मैले कसैको पा’प त गरेको थिइनँ । मलाई यो हालतमा किन पुर्‍याए ?’ यति भन्दाभन्दै उनले हातमा लगाएको क्यानु,ला चुँ’डाइन्, ‘तपाईंहरूलाई थाहा छ, अब म आमा बन्न सक्दिनँ । नभए मेरो पेट किन का,ट्यो ? कसले का,ट्यो ? मैले के अ’परा,ध गरें ?
नजिकै बसेर उनको यो हालत हेरिरहेकी र उनीमाथिको अ’त्या,चारबारे जानकार एक नर्स आँखाभरि आँसु पार्दै डाक्टर बोलाउन गइन् । केहीबेरमै आएका डा. सन्दीप ओखेडा र मिलन खड्काले उनलाई फकाउँदै हातका नसा खोजे, फेरि क्यानुला घोपे र इन्जे,क्सन लगाइदिए । केहीबेरमा उनी सुस्ता,उन थालिन् । उनी शान्त भएपछि पी’डितका काकाले घ’टनाको बेलिबिस्तार लगाए । माइती घर बुंगल नगरपालिका–२ की ती युवतीको तीन वर्ष पहिला मात्रै बित्थडचिर गाउँपालिका–९ सुनकुडाका एक युवकसँग विवाह भयो । नौ महिनाकी हुँदै छाडेर आमाले अर्कैसँग विवाह गरेपछि काकाले संरक्षण गरे र उनैले २०७४ असारमा कन्यादान गरे । ‘पहिलो वर्ष त राम्रै थियो । त्यसपछि मेरी छोरीमाथि जे भयो म कसरी बताऊँ ?’ काकाले भने, ‘दुःख गरेर हुर्काएकी मेरी छोरीलाई रा,क्ष’सहरूले दिनु दुःख दिएछन् ।’
विवाह गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनको कोखबाट बच्चा नभएपछि गत कात्तिक २८ गते उपचारका लागि युवती, उनका श्रीमान्, सासूससुरा र नन्द सुनकुडाबाट भारत जाने भनेर हिँडे । एक सातासम्म सासूको माइती घर बैतडीको गड भन्ने ठाउँमा बसेर स्थानीय धामी र वैद्यले उनको उपचार गर्ने भन्दै झा,रफुकतिर पनि लागे । त्यसपछि सबै भारतको बेंग्लोर पुगे । त्यहाँँ काम नपाएपछि पी’डित युवतीसहित सासू र नन्दलाई बेंग्लोरमै रहेको जेठी छोरीको कोठामा छोडेर ससुरासहित काम खोज्न तमिलनाडु पुगे । तमिलनाडुको जिपुर अग्नासी भन्ने ठाउँको एउटा कपडा कारखानामा सबैका लागि काम खोजेर ससुरा र श्रीमान् उनीहरूलाई लिन बेंग्लोर फर्किए । उनीहरूका साथ लागेर बेंग्लोरमै रहेका उनका नन्दको परिवार पनि काम गर्न तमिलनाडु पुग्यो । कारखानाले नै उपलब्ध गराएको दुईवटा सुत्ने कोठा र एउटा भान्सा कोठा भएको फ्ल्याटमा उनीहरू बस्न थाले । महिलाहरू (पी’डित युवती, सासू र नन्द) दिउँसो कम्पनीमा गएर धागो बनाउने काम गर्थे । पी’डितका श्रीमान् १५ दिन दिउँसो र १५ दिन राति त्यही कम्पनीमा चौकीदारी गर्थे । ससुराको दिउँसोको ड्युटी थियो ।
‘उनका श्रीमान्को राति ड्युटी परेका दिन ससुराले सुत्ने बेला दूधमा बे,होस हुने औ,षधि हालेर खुवाउँदो रहेछ अनि बला,त्कार गर्ने रहेछ,’ पी’डितका काकाले भने, ‘श्रीमान् कोठामा नभएको रात आफूमाथि यौ,नसम्पर्क भएको कुरा छोरीले बिहान मात्रै (शरीरमा लागेको वी,र्य आदिको माध्यमबाट) थाहा पाउने रैछ ।’ दिनहुँ श्रीमान् नभएका बेला स,म्पर्क हुन थालेपछि उनले एक दिन ससुराले दिएको दूध खाए जस्तो मात्रै गरेर सुटुक्क फालिदिएपछि घ’टनाको र,ह’स्य पत्ता लाग्यो । ‘उनी चि,च्याएपछि सासू र ससुरा लागेर कु’टेछन् । सासूले हातखुट्टा च्यापि,छन्, ससुराले क’र’णी गरेछन्,’ उनले भने ।
भोलिपल्ट बिहान ससुराले गरेको सबै कु,कर्म उनले श्रीमान्लाई बताइन् तर श्रीमान्ले साथ दिनुको सट्टा उल्टै ससुरालाई साथ दिए । त्यसपछि क’र’णी र या,तनाको क्रम झन् हिं,स्रक हुँदै गयो । ‘त्यो कुरा श्रीमान्लाई भनिसकेपछि त रा,क्षसहरूले झन् सास्ती दिन थालेछन्,’ पी’डितले सुनाएको आधारमा काका भन्दै थिए, ‘रक्सी खाएर तीनै जना (श्रीमान्, ससुरा र नन्दका श्रीमान्) मातेर आउँथे । क’र’णी गर्न नदिए चुरोटले स्त,न, पेट, ति,घ्रा र संवेद,नशील अंगमा पोल्थे । यो कुरा बाहिर भने मा,रिदिन्छु भन्थे । अनि तीनै जना रातभर सँगै क’र’णी गर्थे ।’
यसैबीच युवतीको पेटमा ग,र्भ रह्यो । दुई महिनासम्म महि,नावारी नभएको थाहा पाएपछि उनका ससुराले नै तमिलनाडुको एक अस्पतालमा लगेर गर्भ,पतन गराए । ‘गर्भ,पतन गराएकै दिन दुई जना अन्य मानिस बोलाएर पाँच/पाँच हजार भारु लिएर फेरि उसलाई क’र’णी गर्न लगाएछन्,’ पी’डितका काकाले भने, ‘बाबु र छोरा ढोकामा बसेर उनीहरूलाई भित्र पठाएछन् । पी’डाले छ’टप’टाएकी छोरीले पानी देऊ भन्दा उसको मुखमा पि,साब फेरिदिएछन् ।’
त्यस दिन बाहिरबाट क’र’णी गर्न आउने दुई जना नेपाली भए पनि छोरीले नचिनेको काकाले बताए । ससुरा, श्रीमान् र नन्दका श्रीमान्ले आफूलाई मन लाग्दा क’र’णी गर्ने र अरू बेला पैसा लिएर बाहिरका मान्छे बोलाएर नियमित क’र’णीमा लगाउने गरेका रहेछन् । यसैबीच उनलाई वे,श्यावृत्तिमा लगाउने उद्दे,श्यले स्थायी ब’न्ध्या,करण (मिनि,ल्याप) पनि गराइएको काकाले सुनाए ।
जिल्ला अस्पतालकी मनोसामाजिक परा,मर्शकर्ता शान्ति अवस्थीले लगातारको क’र’णी र यातनाका कारण उनी ग,म्भीर खालको मा,नसिक सम,स्यामा परेको बताइन् । –कान्तिपुरबाट
Prevमैले भेन्टिलेटरको स्विच अफ गरिदिएँ ताकि उनी शान्तिसँग म’र्न सकुन्…
Nextरवि लामिछानेको स्टुडियो पुगेका रविन्द्र मिश्रलाई के भयो ?
बाढीले काठेपुल भत्केपछि नागरिकलाई आवतजावतमा समस्या
एकातिर खुसि अर्काेतिर दु:ख – छोरी जन्माइन्, तर छोरीलाई काखमा राख्न नपाई संसार बाटै विदा भइन् कृपया रिप लेखिदिनु होला